Shuruudaha qaabeynta ee ah inaad ka ogaato Naqshadeynta Sawirka | Abuurista khadka tooska ah
Naqshad qaabeed aad ayey muhiim u tahay in la ogaado ereyada qaabab kala duwan, maxaa yeelay maaraynta luqad gaar ah, waxay ka dhigeysaa shaqada mid aad u fudud waxayna yareysaa waqtiga sharraxaadda mid kasta oo ka mid ah waxyaabaha aad rabto inaad sameyso, marka lagu daro u xilsaaridda fikrad sax ah, oo leh hal eray oo keliya, ficil ama geedi socod.
Waxaan ula jeedaa, markaad isticmaasho ereyada saxda ah iyo gaar ahaan qaabaynta garaafka, taas oo waxaad ku sheegi karto waxaad rabto hal eray oo kaliya. Sidaa darteed, haddii aad galeyso adduunyada naqshadeynta garaafka, waxaa muhiim ah inaad taqaanno ereyada noocyada kala duwan ee kuu adeegi doona inta aad ku guda jirto xirfaddaada.
Erayo qoraal oo kala duwan
Marka hore, Waxaan kaaga warrami doonnaa noocyada farta lagu qoro iyo noocyada websaydhka. Mid ka mid ah waxyaabaha aad u baahan tahay inaad ogaato ayaa ah in nooca loo yaqaan 'typeface' uu tilmaamayo naqshad gaar ah ama qaab xaraf kasta. Tusaale ahaan, nooca qoraalka Arial wuxuu leeyahay qaab aad u kala duwan Cambria o cabirrada. Dhinaca kale, marka laga hadlayo xarfaha, markaa waxaan ka hadlaynaa cabbirka mid kasta oo ka mid ah xarfahan, masaafada u dhaxeysa mid kasta oo ka mid ah markii qoraal lagu sameynayo far-qoraal.
Mid ka mid ah waxyaabaha ilaha ay ka kooban yihiin ayaa ah dhibco italic ah, tusaale ahaan.
Maalmahan fikradaha ayaa isbadalay oo naqshadeynta gudaheeda qeexida noocyada canaasiirtu aad ayey ufudud badan tahay. Loogu talagalay naqshadeeyaha maanta, typography waxaa loola jeedaa naqshadeynta ama sida wejigu u muuqdohalka farta qoraalka ay tahay waxa la arki karo. Sidoo kale, font waa cunsurka la adeegsaday, taas oo ah, muuqaal muuqaal ah oo nooca qoraalka ah.
Jilayaasha sidoo kale erey kale oo aad u badan tahay inaad maqashay oo xitaa aad isticmaashay waana in jilayaashu ay yihiin dhammaan astaamaha shaqsi ee ka kooban qoraalka, tusaale ahaan, astaantu waxay noqon kartaa xaraf, calaamado calaamado ama lambarro.
Waxaa jira nooc kale oo dabeecad ah oo la yiraahdo jilayaal kale, oo tilmaamaysa dhammaan kala duwanaanshaha isku dabeecad ah. Noocyada jilayaasha ah ayaa sidoo kale loo yaqaan glyphs waxaana guud ahaan loo isticmaalaa in lagu qurxiyo ama lagu daro lahjad. The serif Sidoo kale waa erey kale oo ay tahay inaad ogaato waana inay iyagu asal ahaan yihiin xariijin toosan oo la dhigo dhamaadka waraaqaha ujeeddooyin qurxin.
El tan ka soo horjeedana waa tan san serif, kuwaas oo asal ahaan xarfo aan lahayn nooc khad dhamaadka.
Tusaale ahaan, waxaan iftiimin karnaa Waqtiga Cusub Roman, oo ay ku jiraan serif, oo leh Arial, taas oo aan lahayn. Dhanka kale, italic waa erey laga yaabo in yaqaan oo og sida loo isticmaalo tan iyo carruurnimada, maadaama ay tahay mid ka mid ah cunsurrada ugu isticmaalka badan.
Faallooyinka farta ayaa leh taas rabitaan aad leedahaytiro ama xarfo badan ama lambarro. Aagga kala dheereynta iyo meeleynta, waxaa jira shuruudo qaarkood oo ay tahay inaad ogaato sida gundhigga. Kani waa khad mala-awaal ah oo loo malaynayo in lagu qoro dhammaan xarfaha, lambarrada iyo astaamaha dukumiintiga ku jira.
Waxaa jira erey kale oo la yiraahdo Khadka Furka, taas oo loola jeedo khadka khayaaliga ah ee ugu sarreeya ee tilmaamaya xadka xarfaha waaweyn iyo kuwa yaryar. ka raadraaca waa eray loo adeegsado in lagu muujiyo sida ay u wadaagaan astaamaha qoraalka, taasi waa, sida ay u midoobeen ama u kala fogaadeen xarfaha ama lambarrada dukumiinti
El haraati waa erey kale oo muhiim ah oo ay tahay inaad ogaato iyo waxaa loola jeedaa fogaanta jiifka ah ee udhaxeysa laba xaraf. Iyada oo leh masaafada noocan ah waxay siinaysaa dareen ah xarfo isku mid ah ama lambarro, marka lagu daro abuuritaanka qaab quruxsan oo isha aadanaha ah. Sida ay tahay faaligga qoraal ahaan, waxaan u tilmaami karnaa jirida kaas oo loola jeedaa sadarka ugu horreeya ee lagu sameeyay dabeecad markii gacanta lagu qoro, ka muuqato qoraalka kombuyuutarka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » Shuruudaha nooca ee ah inaad ka ogaato Naqshadeynta Sawirka